Luxury villa Isabella ehlathini e Baarle-Nassau
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguSimon
Luxury villa holide ehlathini kwiholide parc de Kievit usapho olugqibeleleyo / umhlobo ukubaleka kwindawo eluhlaza kakhulu kwaye ezolileyo.
Sinamagumbi okulala ama-4 (apho ama-2 awo anokuguqulwa abe yindawo yokusebenza/yokufunda), igadi eluhlaza kunye nebhafu yabantu abasi-7 yeSilverspa.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo.
Igadi ineendawo ezi-2 zokutyela zangaphandle (ezine-BBQ) kunye neendawo ezahlukeneyo zokudlala nezokuphumla.
Kukho ichibi lokuqubha elingama-25m kunye nedama elincinci labantwana abasafundayo, iinkundla zentenetya kunye namabala okudlala akwiparc.
UVilla Isabella uyonwaba kakhulu ngexesha lemozulu ebandayo okanye eshushu.
Ngexesha leenyanga ezibandayo kubanda kakhulu ngaphakathi ngenxa yenkqubo yokufudumeza ephakathi kwaye ngenxa yendawo yomlilo kunye nesofa enkulu, indawo yokutyela kunye nekhitshi. Amagumbi okulala ama-2 kumgangatho ophantsi angajikwa abe yiofisi / amagumbi okufunda ngemizuzu. Xa imozulu intle ngesiquphe ube ne-1000m2 yendawo eyonwabisayo yegadi ngqo ngaphandle. Sineendawo ezahlukeneyo zokuphumla zangaphandle zokuzipholela, ukufunda incwadi, ukusela okanye ukuba ne-BBQ yosapho entle.
Yonke le ndawo isandula ukulungiswa. Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo kuyo yonke imigangatho yangoku kunye nolawulo oluhlakaniphile. Ine-wifi macala onke, inkqubo yesandi ye-Bose enkulu kunye ne-TV yescreen esicaba kunye neNetflix kwigumbi lokuhlala kunye neendawo zokulala ezinkulu.
Sineebhayisekile ezi-2 ezinokuthi zenziwe zifumaneke ngesicelo, kunye nesikuta, iskelter kunye nebhayisekile yabantwana.
Igumbi lokuhlala linesofa ekhululekile, isitulo sokuphumla esilungelelanisiweyo kunye netafile yokutyela yabantu aba-6. Kukho i-smart tv (ngokubhaliselwa kwentambo kunye neNetflix), indawo yomlilo kunye nemidlalo yebhodi eyahlukeneyo iyafumaneka.
Le villa inekhitshi langoku elixhotyiswe ngokupheleleyo (eneMicrowave, iOveni, iwasha yezitya, umenzi wekofu weDolce Gusto, iBlender, iRise cooker, iAir fryer, ifriji eqhelekileyo, isibandisi sewayini kunye nesikhenkcezisi). Sisoloko sibonelela ngeepods zekofu.
Sinegumbi elincinci lokuhlamba impahla kunye nendibaniselwano yokuhlamba/yokomisa, kunye nebhodi yentsimbi.
Igumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela eline-ensuite
Eli gumbi linokumkani ubungakanani 5 star hotel umgangatho boxspring ibhedi, ilinen ekumgangatho ophezulu enikeziweyo. Ibhedi ilungelelaniswe ngabanye macala omabini. Kukho i-smart tv eneNetflix. Eli gumbi linegumbi lalo lokuhlambela elinendlu yangasese, ishawari (enentloko yeshawari yaseGrohe ekhululekileyo) kunye netafile yokuhlamba ngesipili.
Ukuvuka kweli gumbi kukuvuyisa, njengoko uya kujikelezwa ngumbono oluhlaza kunye nesandi seentaka.
Abantwana / Igumbi elinebhedi
Le yindlu yokulala encinci kunye nebhedi ye-bunk (ekwafanelekile kumntu omdala) . Kukho izinto zokudlala ezahlukeneyo kweli gumbi.
2 Amagumbi eendwendwe aguqulelwa ekubeni afundele
Kukho amagumbi okulala ama-2 kumgangatho ophantsi aneebhedi ezinobukhulu bendlovukazi kunye nomatrasi otofotofo kunye nelinen ekumgangatho ophezulu ebonelelweyo. Omabini la magumbi anokujikwa kwiofisi/amagumbi okufunda ngemizuzu ngenxa yodonga olukhethekileyo lweClei Ulisse / iibhedi zedesika.
Igumbi lokuhlambela elisezantsi
Indlu yokuhlambela kumgangatho ophantsi ilula, kodwa iyasebenza. Ineshawa (enentloko enkulu yeshawa yaseGrohe), indlu yangasese kunye netafile yokuhlamba ngesipili.
Igadi yabucala ijikelezwe luthango oluluhlaza ngaphambili, ucingo olungaphandle ngasemva kunye nesango lokungena ukuqinisekisa ukuba abantwana bakho abanakubhadula ngaphandle kwepropathi. Kukho ingca eninzi yokudlala kwaye i-drivelane ifanelekile ukudlala umdlalo we-badminton okanye i-jeux de boulles. Igadi ine-trampoline enkulu kunye nendlu yokudlala ene-2 swings kunye nesilayidi. Ingca igcinwa yonke imihla yirobhothi yokucheba.
Igadi - Front Terrace
I-terrace yangaphambili inetafile yokutya yabantu abayi-8, i-parasol ehlengahlengiswayo kunye nendawo yomlilo.
Igadi - Indawo yokuphumla / indawo yeBBQ
Sinendawo yokuphumla enesofa kunye nezihlalo zokuphumla, indawo yomlilo ebaswe ngegesi kunye nefriji yokugcina iziselo zakho zibanda. Kukwakho netafile yokutyela yabantu aba-6, iambrela ehlengahlengiswayo kunye neentlobo ezi-2 ze-BBQ onokukhetha kuzo (i-Weber yamalahle agxothiweyo okanye i-Weber gas egxothiweyo).
Igadi - indawo yeJacuzzi
I-jacuzzi yethu ngaphandle inabantu abasi-7 bokuhlambela i-Silverspa eshushu. Kukwakho neshawari yasegadini enamanzi ashushu.
Indlu ine-smart lightning system yi-Philips hue, enokulawulwa ngumncedisi wezwi okanye nge-app, enendawo enhle kuyo nayiphi na imeko. Nokuba iimfama zinokulawulwa zii -apps okanye ngemiyalelo yelizwi.
55" HDTV ene-I-Chromecast, I-Netflix
4.68 · Izimvo eziyi-84
SiseParc de Kievit, indawo entle egcinwe kwihlathi laseBaarle-Nassau. Abantu beza apha ukuze baphumle kwindawo ezolileyo nezolileyo.
Ilali iBaarle-Nassau (eNetherlands) okanye iBaarle-Hertog (eBelgium) yindawo entle yokuthenga, yokutya okanye usele nje iziselo kwenye yeeteyiti.
Indawo ilungile yokuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile.
Singaphakathi kwemizuzu engama-30 ukusuka kwizixeko zaseTilburg, Breda kunye ne-Antwerpen, iTurnhout, kunye ne-Efteling.
Malunga neParc de Kievit
I-Parc De Kievit inendawo yokutyela kwindawo. Unokonwabela isiselo kwi-terrace okanye utye ukutya okulula apha. Izitya ezikwimenyu zinencasa kwaye ziyafikeleleka.
EParc De Kievit ungasebenzisa iinkundla zentenetya ezinengca eyenziweyo. Uya kufumana kwakhona inkundla ye-jeu de boules, ibala legalufa elincinci kunye nenkundla yokugoba phakathi kwemithi.
Ngaba ukhetha ukudlala igalufa? Kwindawo ye-'Utrecht' e-Esbeek kukho ibala legalufa elihle elinemingxuma eli-18 yeklabhu yegalufa iMidden-Brabant. Ikhosi yimizuzu eyi-15 kuphela ngemoto ukusuka eParc De Kievit, kwindawo entle yehlathi.
Indawo ejikeleze iParc De Kievit ilungele kakhulu ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile. Iibhayisikili eziqashisayo kunye ne-scooters zinokugcinwa kwindawo yokwamkela i-parc.
I-Parc De Kievit inedama lokuqubha langaphandle elishushu kunye nedama labantwana abaselula. Kukho iishawa kunye nezindlu zangasese. Kwandlalwe izitulo ezijikeleze idama ukuze abazali babeke iliso kubantwana babo abaqubhayo. Usele utywala ngelixa abantwana bakho besequleni? Emva koko unako. Indawo yokuqubha ibekwe kanye ecaleni kwethafa laseTarverne.
Ndiza kuba lapho ukuze ndikuncede ungene kwaye ndikubonise indawo yonke. Ndihlala kwilali ekufutshane kwaye ndifumaneka ngefowuni kunye nemiyalezo ngexesha lokuhlala kwakho.
Iilwimi: Nederlands, English, Deutsch, Bahasa Indonesia
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Baarle-Nassau